Kooxda Real Madrid oo awoodeeda iskugu geeyn doonto laacib qaali ah oo Ronaldo badalkiisa ah.
Thursday, December 13th, 2018 - 12:32:20
Saturday January 13, 2018 - 00:41:57 in Wararka by Ak Caqil
Real Madrid ayaa dooneeyso inay dareenkeeda u weecisaa soo xero galinta Neymar Jr oo ka tirsan Kooxda PSG. Xiddiga dhawaan galka ah ee Kooxda PSG ayaana ku faraxsaneen inuu Paris u sii ciyaaraa waana tan keentay in Real Madrid ay dareenkeeda iskugu geeysaa soo xero galintiisa, wargeyska Marca ayaa soo xigtay ilo ku dhaw dhaw Real Madrid maamulkeeda waxaana ay sheegeen in Kooxda ay diyaar la tahay €400 oo milyan oo uu ku kacaayo soo xero galinta Neymar.
Kooxda Los Blancos ayaa la dareensan yahay inay dooneeyso inay la soo saxiixataa Galatico xiddig ah oo leh tayo sare ayagoo aan la soo saxiixan laacib macno weyn leh tan iyo 2014-kii markii ay James Rodriguez keeneen Kooxda Caasimada ka dhisan.
Ma aaminsana Kooxda inay macquul tahay in Neymar ay la soo saxiixdaan ka hor xagaaga 2019-ka balse waxaa ay doonaayaan in Cristiano Ronaldo ay geeyaan halka uu Neymar maanta joogo ayagoo heshiish badal iyo lacag ah iskugu dari karo Kooxda PSG oo xiiso badan u qabtay Ronaldo. Neymar ayaa hore uga tirsanaa Kooxda ay cadaw wadaagta yihiin Real Madrid ee Barca taasoo caro ka qaadi karaan Taageerayaasha Barcelona inay arkaan Neymar oo caasimada Madrid ka ciyaaraayo.